मोदी भ्रमणको नियत– ढाड (मधेस)मा टेकेर टाउको (काठमाडौं)मा हान्ने
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर यात्राको सेरोफेरोमा जेजे भयो, उनले जे बोले, त्यसलाई मिहिन ढंगले केलाउन आवश्यक छ ।
मोदीको भाषण र भ्रमणको नियत र अर्थ कसरी खोज्ने भनेर पूर्व प्रसंगमा जानुपर्छ । उनले नेपालमा अत्यन्तै चर्चित भाषण गरेका थिए-संविधानसभामा । ऋषि मनले संविधान बनाउनुपर्छ, सहमतिका आधारमा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर उपदेश दिएका थिए ।
ऋषि मन र सहमति शब्दावली मोदीको मुखबाट निस्कनु राम्रो लक्षण होइन भनेर थोरैले मात्र त्यसबेला भनेका थिए । ६०१ जनाको संविधानसभाले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन किमार्थ सक्ने थिएन । नभन्दै त्यस्तै भयो । संविधान नबनाउ भन्दै खुल्ला हस्तक्षेप गरेपछि अनि नाकावन्दी लगाएपछि मात्र ‘ऋषि मन’ र ‘सहमतिमा संविधान’ शब्दावली भित्रको नियत खुल्यो ।
मोदीले जनकपुरमा पनि अनेक अर्थपूर्ण संकेत गरेका छन् । ती संकेत पहिल्याउन आवश्यक छ । ती संकेत पहिल्याउन भारतको नफेरिएको नीति र फेरिएको रणनीतिबारे विमर्श हुन आवश्यक छ ।
मधेस ढाड, काठमाडौं टाउको
फेरिएको भारतीय रणनीतिलाई एक वाक्यमा भन्नलाई प्रचण्डको भनाई सापट लिन सकिन्छ । त्यो भनाई हो– ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने ।’ नेपालको नयाँ परिस्थितिमा भारतले दुई नम्बर प्रदेशलाई ढाड बनाएर टाउकोरुपी काठमाण्डौंलाई हान्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । मोदीको जनकपुर भ्रमणको सेरोफेरो नियाल्दा यही संकेत पहिल्याउन सकिन्छ ।
जति लम्पसार परे पनि नेपालका नेताहरुलाई भारतले विश्वास गर्दैन । भारतले आशिर्वाद खन्याउने नेता बारम्बार फेर्नुको एक कारण यो पनि हो । विगतका नेताहरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई हामीले जति आलोचना गरे पनि उनीहरुले भारतीय स्वार्थबाट धेरै हदसम्म देशको रक्षा गरेकै हुन् । लम्पसारको पराकाष्ठा बनेको भनिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तिम क्षणमा चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड सम्झौता गरिदिएको तीतो सत्य भारतले भुल्न सक्दैन । भारतले प्रधानमन्त्री बन्न दिन चाहेको थिएन सुशील कोइरालालाई । तथापि उनी भारतीय स्वार्थको घेराभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् भन्ने ठानिएको थियो । सुशीलले संविधान जारी गरेर भारतलाई भयंकर चोट लगाइदिए । देउवाले भारतीय इच्छा अनुसार चुनाव रोक्न सकेनन् ।
ओलीको त कुरै भएन ।
काठमाडौंले कहिल्यै पनि भारतीय स्वार्थ यथेष्ट मात्रामा पूरा गरिदिएन । सामान्य स्वार्थ पूरा गर्न पनि ठूलो दवाब दिनुपर्ने अवस्थामा भारत रहँदै आएको छ । नेपालमा भारतप्रति यति धेरै अविश्वास छ कि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा गरिने आतिथ्य समेत विवादमा पर्छ । यो अवस्था भारत स्वयंले सिर्जना गरेको हो ।
काठमाडौंलाई तह लगाउन भारतले जनजाति र मधेसी कार्ड आविष्कार गर्यो । जनजाति कार्डले काम गरेन । मधेसी कार्डले नेपाललाई ठूलो दवाबमा राख्यो र अहिले पनि राखिरहेको छ ।
जनकपुर भाषणमा भारतीय मिथिला र नेपाली मिथिला संस्कृतिको एकीकृत व्याख्यामा मोदीले जुन समय खर्चिए, त्यो अर्थपूर्ण छ । मिथिला संस्कृति र प्राचीन गौरवको चर्चा गर्दै काव्यात्मक शैलीको आवरणमा मोदीले –‘हमारे सपना एक है, लक्ष्य एक है, आत्मा एक है’ जो भने, त्यसको अर्थ भविष्यमा खुल्दै जानेछ ।
मोदीले ‘मधेस’ र ‘मधेसी’ शब्द एकपटक पनि उच्चारण गरेनन्, त्यसको विकल्पमा ‘मिथिला’ शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । मधेस र मधेसी उच्चारण नगर्नु तर मिथिलामा फोकस गर्नुको अर्थ अवश्य छ ।
जानकी माताको बहाना
मोदीको भनाईको सारतत्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाईमा खोज्न सकिन्छ । राउतले संविधानको ठाडै विरोध गरे । विदेशी सरकार प्रमुखलाई अभिनन्दन गरिने मञ्चमा आफ्नो देशको संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने लालबाबुले नबुझेका होइनन्, बुझेरै विरोध गरेका हुन् । पूर्व योजना अनुसार नै राउतले चर्किचर्कि बोलेका हुन् ।
हिजो मोदीले जे बोलेका थिए, आज लालबाबुले त्यही बोले । मोदीले अहिले जे बोल्न मिल्दैन, लालबाबुले त्यही बोले । अर्थात्, लालबाबुको मुखबाट बोल्न लगाइयो । यसको दूरगामी अर्थ छ ।
यी निम्न तीन चिजलाई एउटै भाँडामा हालौं–
१) तराईको राजनीतिक पृष्ठभूमि
२) तराईमा भारतको नाङगो रुची
३) र, मोदीको जनकपुर भाषण,
अब लालबाबुको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ तराजु ठानौं । त्यो तराजुले भाडा तौल गरौं । यो नापतौलबाट मुख्यत तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ–
१) भविष्यमा नाकावन्दी जस्तैजस्तै केही हुनेछ र त्यो दुई नम्बर प्रदेशको तर्फबाट हुनेछ
२) अब भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दा मुख्यगरी दुई नम्बर प्रदेशको आडमा गर्नेछ
३) दुई नम्बर प्रदेशलाई भारतले ब्ल्याकमेलिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्नेछ ।
यसो होइन भने किन दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी गएर मोदीले आमसभा गर्नुपर्यो ? मोदीको उद्देश्य जानकी माताको दर्शन गर्ने मात्र होइन, दर्शनको आवरणमा केही ठोस मनोविज्ञान फैलाउने हो भन्ने आमसभामा गरिएको लम्बेचौडे भाषणले छर्लङ्ग पार्छ । जानकी माताको दर्शन गर्न मोदी जतिबेला आए पनि हुन्थ्यो । दर्शनको आवरणमा कुटिल राजनीति नै गर्न खोजिएको हो । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे लुम्बिनी दर्शन गर्न आएका थिए, भूटानकी महारानी पनि लुम्बिनी दर्शन गर्न आइन् । उनीहरुले आमसभा गरेनन् । मोदी पनि तिर्थयात्रीका रुपमा जानकी मन्दिर आए हुँदैनथ्यो ? आमसभा नै गर्न पथर््यो र ?
जानकी माताको आवरणमा मोदीले भारत माताको स्वार्थलाई अगाडि बढाएका छन् । नेपाल माताको स्वार्थ रक्षा मोदीले गरिदिने होइन, नेपाली जनता र नेपाली नेताहरुले नै गर्न सक्नुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँछन्, उनले आफ्नो देशको हित नगरेर नेपालको हित गरिदिनुपर्छ भन्ने आशे मानसिकता गलत छ । मोदीले आफ्नै देशको हित हेर्ने हुन् ।
नेपालमा संविधान नै नबनोस्, निरन्तर अस्थिरतामा फसोस् भन्ने भारतले चाहेको थियो । यो प्रमाणित तथ्य हो । संविधान बनाउन नदिनु र नाकावन्दी लगाउनु नेपाललाई अस्थिरतामा फसाइरहने भारतीय नीतिको प्रमाण थियो ।
संविधान बन्यो । तत्कालै संविधान भत्काउन नसकिने देख्यो भारतले । त्यसपछि उसले नयाँ उपाय अपनायो– चुनाव हुन नदिने । नेपालमा आन्तरिक परिस्थिति यस्तो बन्यो कि कसैले चाहे पनि चुनाव रोक्न नसकिने भयो । चुनाव भयो । चुनाव पछि भारत पूरानै नीति र नयाँ रणनीतिसाथ नेपालको राजनीतिक मैदानमा आएको छ ।
चुनावपछि भारतले ओलीलाई फकाउने यत्न थाल्यो । ओली कति फकिए भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । सरकार प्रमुखका रुपमा पालना गर्नुपर्ने शिष्टाचार र छिमेकी देशका सरकार प्रमुख आउँदा देखाउनुपर्ने आतिथ्यकै आधारमा ओली लम्पसार परिसके भनी निष्कर्ष निकाल्नु मनासिब हुँदैन ।
वाम गठवन्धनको उदय भएको छ, यसकै नेताहरुलाई भारतले कठपुतली बनाउन खोज्छ नै । भारतले त्यही प्रयास गरिरहेको छ । झन् ओली त प्रधानमन्त्री नै भए, उनलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर दुना सोझ्याउने प्रयत्न भारतले गर्छ नै । ओलीलाई कसरी लम्पसार पार्न सकिन्छ, कसरी चुकाउन र झुकाउन सकिन्छ भन्ने डिजाइनमा भारतले काम गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
भारतले नयाँ संविधान र चुनावपछिको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर रणनीति परिवर्तन गरेको बुझ्न पनि गाह्रो छैन । जनकपुर भ्रमण, भाषण र सेरोफेरोले संकेत गर्यो– भारत फेरिएको होइन, भारतको रणनीति फेरिएको हो । मोदी फेरिएका होइनन्, उनको रणनीति फेरिएको हो ।
२०७५ बैशाख २९ शनिबार १२:०१:०० मा प्रकाशित